Ra’iisal Wasaare Shtayyeh oo digniin u jeediyay Israel | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ra’iisal Wasaare Shtayyeh oo digniin u jeediyay Israel
Ra’iisal Wasaare Shtayyeh oo digniin u jeediyay Israel
Ra’iisal Wasaaraha Falastiiniyiinta, Mohammad Shtayyeh ayaa si adag uga hadlay isku dhacyada ka soo cusboonaaday Bariga Magaalada Qudus, isagoona digniin adag u jeediyay Maamulka Israel.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegay in cawaaqib xun uu ka dhalan doono wixii ka dhacay Masaajidka Al-Aqsa iyo dadka Falastiiniyiinta ee guryahooda xoogga looga rarayo.
“Waxaan Israel dusha u saarayaa masuuliyadda ah dhibaatada soo gaartay dadkii ku cibaadeysanayay Masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa, waxaana uga digayaa cawaaqib xumida ka dhalan karta weerar noocaasi ah, gaar ahaan isku dayada ku aaddan in dadka laga raro Sheikh Jarrah, dadkaasi oo horey u lahaa dhulkaasi.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Shtayyeh.
Booliska Israel ayaa dadka dibadbaxyada ka wada aagga Masjidka Al-Aqsa ee dhegxaanta tuuraya u adeegsaday bambaanooyinka dheemishka ka sameysan ee aan dadka waxyeelin, rasaasta cinjirka ka sameysan, sunta dadka ka ilmeysiisa iyo booyadaha dhuumaha waaweyn leh ee biyaha tuura.
Hay’adda Bisha Cas ee Falastiiniyiinta ayaa Isniintii sheegtay in dad kor u dhaafaya lix boqol oo qof oo reer Falastiin ah ay ku dhaawacmeen isku dhacyada iyaga iyo Booliska Israel ku dhex maray Bariga Qudus.
Sidoo kale in ka badan 20 askari oo ka mid ah Booliska Israel ayaa ku dhaawacmay qalaalasaha ka taagan magaaladaasi.
Afhayeen u hadlay Maamulka Israel ayaa qalalaasaha Bariga Qudus ku tilmaamay shaqaaqooyin la soo maleygay.
Maxkamadda Sare ee Israel ayaa Isniintii dib u dhigtay dhageysiga rafcaanka ay qaateen in ka badan 70 qof oo Falastiniyiin ah oo Maamulka Tel Aviv uu xoog kaga rarayo xaafadda Sheikh Jarrah ee Bariga Qudus.
Previous articleGalmudug oo shuruud adag ku sii deysay Wariye raq iyo ruuxba la waayay
Next articleIsrael oo duqayn culus ka gaysatay Gaza iyo dad badan oo ku dhintay